ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအချိန်ဇယား | မိသားစုဘဝ - မိသားစုဘဝ
မိသားစုဘဝသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတစ်ဆင့်လူထု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ခိုင်မာသောသမိုင်းရှိသည့်လွတ်လပ်သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ် မှစတင်၍ မိသားစုဘဝသည်တိုင်းတာနိုင်သောလူမှုရေးပြောင်းလဲမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပေးစွမ်းသောသုတေသန၊ ဗဟုသုတနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ဗဟိုဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
မိသားစု၊ ကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များအတွက်တိုးတက်သောရလဒ်များအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်မိသားစုဘဝ၏သမိုင်းတွင်အထူးအရေးကြီးသော၊ ဆန်းသစ်တီထွင်သောသို့မဟုတ်အရေးပါသောအဖြစ်အပျက်များ၏သက္ကရာဇ်စဉ်အတိုင်းအောက်တွင်ပြသထားသည်
၂၀၁၈ - The GiveEasy 2018 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုညွှန်းကိန်း - မိသားစုဘဝသည်ထိပ်တန်းဆယ်ယောက်စာရင်းတွင်ရှိသည်
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင်သြစတြေးလျရှိ GiveEasy အတွက်အကျိုးအမြတ်မယူသည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအညွှန်းကိန်းတွင် Family Life ကိုထိပ်တန်း ၁၀ ဦး တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ အညွှန်းကိန်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုတီထွင်ရန်နှင့်ဖြန့်ဖြူးရန်စွမ်းရည်အရအဓိကအမျိုးအစားရှစ်ခုအရတိုင်းတာသည်။ နည်းပညာ၊ ပြည်တွင်းပူးပေါင်းမှု၊ ပြင်ပပူးပေါင်းမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအာရုံစူးစိုက်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု / အမြင်အာရုံ၏ပွင့်လင်းမှု၊
GiveEasy 2018 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုညွှန်းကိန်းကိုကြည့်ပါ
2018 - Catch Up - သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးများ၏အနာဂတ်ကိုလုံခြုံရေး
Family Life မှတီထွင်ထားသော Catch Up သည်ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်သည်အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်မှုအန္တရာယ်အပါအ ၀ င်အမျိုးသမီးများ၏အားနည်းချက်ပိုမိုများပြားလာခြင်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Catch Up သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်သားအင်အား၏ဥာဏ်ပညာနှင့်ဘဝအတွေ့အကြုံများကိုမိသားစုဘဝ၏ ROME (သုတေသန၊ ရလာဒ်များ၊ တိုင်းတာခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း) အဖွဲ့မှသုတေသနပြုခြင်းဖြင့်အတူတကွစုစည်းနေပြီး၊ အသိပညာမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအားသူတို့လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမဟာဗျူဟာများကိုဖော်ထုတ်ရန်။ သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပို။ ထိန်းချုပ်မှုယူပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
2018 - Here4U - မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုစောင့်ကြည့်သူကြားဝင်စေ့စပ်ရေးအစီအစဉ်
Here4U ဆိုသည်မှာမိသားစုအကြမ်းဖက်မှုကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းနှင့်သင့်လျော်စွာတုန့်ပြန်မှုပြုရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းသားများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောမိသားစုအကြမ်းဖက်မှုကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်သည်သင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ရပ်ရွာလူထုတွင်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ရန်နှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်သဘောထားများအားတုံ့ပြန်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်များပေးသည်။ Here4U ပရိုဂရမ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ
2018 Reboot - ဆယ်ကျော်သက်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုအစီအစဉ်
Reboot ဆိုသည်မှာမိသားစုဘဝနှင့် TaskForce မှပူးတွဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောအပြုအမူဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုတိုးများလာခြင်းကိုတန်ပြန်ရန်။ အဓိကအာရုံစိုက်ရာမှာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုအသုံးပြုသောလူငယ်များ၏ဘဝလမ်းကြောင်းကိုအပြုသဘောဖြင့်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ မိသားစုကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ တရားရုံးသို့လွှဲပြောင်းရန်ရွေးချယ်ရန်နှင့်တရားမျှတမှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်၎င်းနေရာတွင်နေရာယူထားသည်။
Reboot Program အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ
2017 - Heartlinks - မိသားစုဘဝ၏လူမှုရေးလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့သည်
ဒေသခံမိသားစုများကိုထောက်ပံ့ခြင်း၏ခိုင်မာသောသမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ Family Life သည်မိသားစုဘဝ၏လူမှုရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော Heartlinks ကိုစတင်ခဲ့ပြီးဆက်ဆံရေးပညာရေးနှင့်အကြံပေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခဲ့သည်။
2016 - ဆရာများနှင့်ကျောင်းများအတွက်စိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတိုးချဲ့ခြင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်မိသားစုဘဝသည် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးချဲ့ခဲ့ပြီးဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်ကျောင်းများကိုကလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်စိတ်ဒဏ်ရာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ရန် Neurosequential ပညာရေးပုံစံ (NME) ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အထူးမိသားစု Family Life စိတ်ဒဏ်ရာအဖွဲ့သည်ယခုအခါ Hopscotch စီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအထူးကု၊
၂၀၁၈ - The GiveEasy 2016 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုညွှန်းကိန်း - မိသားစုဘဝသည်ထိပ်တန်းဆယ်ယောက်စာရင်းတွင်ရှိသည်
၂၀၁၆ ခုနှစ်မေလတွင် Australia Post နှင့် Westpac တို့၏ထူးခြားသောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တိုင်းတာသည့်အတိုင်းသြစတြေးလျရှိအမြတ်အစွန်း ၁၀ ခုတွင် Family Life ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အရှက်ခွဲရမည့်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်း ၁၁၀၀ ကျော်ကိုစစ်တမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် GiveEasy 2016 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုညွှန်းကိန်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။GiveEasy 2016 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုညွှန်းကိန်းကိုကြည့်ပါ
2014 - စိတ်ဒဏ်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုအကြောင်းကြားခဲ့သည်
မိသားစုဘဝသည် NMT ရှိ site အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အတူစိတ်ဒဏ်ရာအကြောင်းကြားခြင်းနှင့်တိကျသောဝန်ဆောင်မှုများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ မိသားစုဘဝသည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ChildTrauma Academy (CTA) မှဒေါက်တာ Bruce Perry မှတီထွင်ခဲ့သော Neurosequential of Therapeutics Model (NMT) တွင်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် 'site အသိအမှတ်ပြုခြင်း' တို့ဖြင့်စိတ်ဒဏ်ရာအကြောင်းကြားခြင်းနှင့်တိကျသောဝန်ဆောင်မှုများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Neurosequential ပုံစံသည်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လွယ်သောကလေးများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအသိပေးမှု၊ ဇီဝဗေဒနှင့်လေးစားမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ - SHINE ဝက်ဘ်ဆိုက်
SHINE ကလေးများ၏စိတ်ကျန်းမာရေးစီမံကိန်းကိုထောက်ပံ့ရန်ကလေးများအတွက် SHINE ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်စတင်ခဲ့သည်။
တောက်ပသောသရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်ကလေးများအတွက်ဖော်ရွေသောစကားများဖြင့်စာမျက်နှာတစ်ခုစီသည်အန္တရာယ်ကျရောက်လွယ်သောကလေးများ၏အာရုံကိုဖမ်းယူထိန်းသိမ်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၀ မ်းနည်းမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ဒေါသနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်စာမျက်နှာများသည်သူတို့၏ဝေါဟာရများကိုတိုးချဲ့ပြီးအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ၎င်းတို့အားအချက်အလက်များအားကူးယူခြင်းနှင့် SHINE နှင့်အခြားသက်ဆိုင်သောစိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာပေးလိမ့်မည်။
၂၀၁၄ - Bayside ကလေးဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုဖွင့်ပွဲ
Bayside ကလေးဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလူမှုရေးလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ မိသားစုဘဝလူမှုအသိုက်အ ၀ န်း၏အိမ်တစ်ခုတွင်တည်ရှိပြီး Bayside Children Contact Service သည်အိမ်ကဲ့သို့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးမိသားစုများအား၎င်းတို့အားထောက်ပံ့မှုများလိုအပ်သရွေ့ကာလပတ်လုံးရနိုင်သည်။ (အများဆုံးလည်ပတ်မှုအရေအတွက်မရှိပါ)ပိုမိုဖတ်ရှုရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ.
2013 - မှတ်တိုင်များ
အဖွင့်အဖွင့်အဖြူရောင်ဖဲကြိုးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ - အမျိုးသမီးများအပေါ်အမျိုးသားများအကြမ်းဖက်မှုကိုတားဆီးသည့်ဒေသဆိုင်ရာမှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိသားစုဘဝ Family Life ၏တင်ဆက်မှုမှာ“ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များအားအထီးကျန်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုကိုတားဆီးရာတွင်ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ '” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်တင်ဆက်ခဲ့သည်။
မိသားစုဘဝ၏စီအီးအိုကိုတိုင်းတာသည့်လူမှုရလဒ်များညီလာခံ - ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် - 'Big Idea' - လူမှုရလဒ်များကိုတိုင်းတာရာတွင်ရပ်ရွာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြချက် - မိသားစုများကိုအားကောင်းစေသည့်အစီအစဉ်များတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတည်ဆောက်ရန်တင်ပြသည့်အကဲဖြတ်လေ့လာမှုခရီးစဉ်။
Developing Practice တွင်ထုတ်ဝေသော Family Life SHINE ကလေးများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစာတမ်း။
Family Life SHINE ကလေးသူငယ်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစီမံကိန်းကိုကလေးများ၊ လူငယ်များနှင့်မိသားစုများအတွက်ထိရောက်သောရပ်ရွာအခြေပြုစိတ်ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ လက်ရှိမိသားစုဘဝမိသားစုအထောက်အပံ့ ၀ န်ဆောင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆက်နွယ်မှုများကို အသုံးပြု၍ စိတ်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေမည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်အစိုးရ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတိုးမြှင့်ထားသည်။
McCoy, A. & Morehouse, K. (2013) ကလေးများ၏စိတ်ကျန်းမာရေးကော။ မိသားစုဘဝမှရရှိသောအကဲဖြတ်တွေ့ရှိချက်များ SHINE ကလေး၏စိတ်ကျန်းမာရေးရှေ့ပြေးစီမံကိန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောအလေ့အကျင့်၊ ၃၄၊ စ။ ၈၁-၈၉
မိသားစုဘဝ၏စီအီးအို Jo Cavanagh သည်ဒေသခံပိုင်ဆိုင်မှုများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုတွင် Foresters Community Finance မှဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
2012 - မှတ်တိုင်များ
Jo Cavanagh နှင့်ထိုစဉ်က Family Life ၏ဥက္ကGrant္ဌ Grant Douglas သည် Sandringham အသင်းဝင် Mr Murray Thompson MLA က Hansard ၌သူတို့၏ကောင်းသောအလုပ်အတွက်ချီးကျူးခြင်းခံရသည်။
မိသားစုဘဝကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ရွာအခြေပြုအစီအစဉ်၏ဘုရင်မအဲလစ်ဇဘက်စင်တာ (၆) ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတွင်တင်ပြခဲ့ပြီး၊ မိဘများ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင်လိုချင်သောရလဒ်များကိုရရှိရန်အသုံးပြုသည်။
မိသားစုဘဝနှင့်လူမှုရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသြစတြေးလျကွန်ဖရင့်တွင်မိသားစုဘဝကိုတင်ဆက်ကာတန်ဖိုးကြီးမားသည့်ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လျစ်လျူရှုမှုများကိုကာကွယ်ရန်မိသားစုအားဖြည့်အစီအစဉ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ဆန်းသစ်သောနည်းစနစ်ကိုပြသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို Centacare Broken Bay, NSW နှင့် Anglicare WA တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ တင်ပြခဲ့သည်။
Family Life SHINE သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဖိုရမ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနာမှုဆိုသည်မှာစိတ်ကျန်းမာရေးဖိုရမ်အတွက်အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနာနေသောဖောက်သည်များအားထောက်ပံ့ခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးခဲ့သည်။
မိသားစုဘဝကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ကျင်းပခဲ့သောကလေးနှင့်မိသားစုသက်သာချောင်ချိရေးသုတေသနဌာန၏ထူးချွန်မှုစင်တာတွင်တင်ပြခဲ့သည်။ တင်ပြချက်တွင်အားနည်းချက်များရှိသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်ကလေးသူငယ်များနှင့်မိသားစုများအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုမည်သို့ရရှိကြောင်းပြသသည့်မိသားစုဘဝ၏ဖန်တီးနိုင်စွမ်းခေါင်းဆောင်များအစီအစဉ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
2011 - မှတ်တိုင်များ
Jo Cavanagh သည်ဗေသနိရွာသူရွာသားများဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့၏နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်လူမှုပြန်ကြားရေးကိုတိုင်းတာခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ သက်ဆိုင်သည့်လူမှုရေးပြissuesနာများကိုဆွေးနွေးရန်တင်ပြခဲ့သည်။
Family Life Community Education Worker သည်ကျောင်းသူ / သားများအတွက် Kingston's City2Kind 600 Mind စိတ်ကျန်းမာရေး Initiative အစီအစဉ်အတွက်အခမ်းအနားများကို Master အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
မိသားစုဘဝကိုPsychစတြေးလျစိတ်ပညာလူ့အဖွဲ့အစည်းအမျိုးသားညီလာခံတွင်ကလေးနှင့်မိသားစုစိတ်ဝင်စားမှုအဖွဲ့သို့တင်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါတင်ပြချက်တွင် Family Life SHINE အစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုထားသောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမဟာဗျူဟာများကိုဖော်ပြထားသည်။
Creating Capable Communities (CCC) ကိရိယာတန်ဆာပလာကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မိသားစုဘဝနှင့်ရပ်ရွာလူထုများအားကောင်းလာစေရန်အတွက်မိသားစုဘဝတွင်သက်သေပြနိုင်သော Creating Capable Communities ပုံစံကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုသောအခြားအေဂျင်စီများကိုထောက်ပံ့ရန်အရင်းအမြစ်။
2011 ခုနှစ်မတိုင်မီ - မှတ်တိုင်များ
2010 - မှတ်တိုင်များ
သြစတြေးလျဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်ကမိသားစုဘ ၀ ကို '၁၇ ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်တွင်ကလေးများ၏ပါ ၀ င်မှု။ ဆောင်းပါးကြည့်ရှုရန်ဒီမှာနှိပ်ပါ.
မိသားစုဘဝ ၀ န်ထမ်းများသည် MFS အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ်ကို (ထိုအချိန်က MATES ဟုသိကြသော) အမျိုးသား TAFE ကောလိပ်များအားအထောက်အကူအဖွဲ့များအတွက်စံပြအဖြစ်တင်ပြခဲ့သည်။
2009 - မှတ်တိုင်များ
မိသားစုဘဝကိုကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်interventionရိယာစိတ်ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ (CAMHS) တွင်စိတ်ကျန်းမာရေး၊ အစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
ရပ်ရွာဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဂျူဒစ်လက်တ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးအော်လင်းပြည်နယ်၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကွန်ဖရင့်တွင်မိသားစုဘဝ၏အလေ့အကျင့်ကောင်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းအစီအစဉ်ကိုတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
2008 - မှတ်တိုင်များ
Jo Cavanagh အား '' ကလေးသူငယ်များအလွဲသုံးစားမှုကာကွယ်ခြင်းသုတေသနသြစတြေးလျ '' ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည်။ သြစတြေးလျကလေးသူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ Monash တက္ကသိုလ်နှင့် Access Economics မှထုတ်ဝေသည်။
မိသားစုဘ ၀ သည်စိုးရိမ်မှုများနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမှကာကွယ်ရန် ၁၀ ပတ်ကြာကြိုတင်ကာကွယ်ထားသောစိတ်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ဖြစ်သော 'Life for Life' အစီအစဉ်ကိုစတင်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်မိသားစုဘဝသည်အခြားသူများကိုသင်တန်းနည်းပြအဖြစ်သင်တန်းပေးရန်လိုင်စင်ရရှိခဲ့သည်။ သုတေသနပြုချက်အရကလေးများသည်အစီအစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့် ၇ နှစ်အထိမြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းပြသသည်။
2007 - မှတ်တိုင်များ
Jo Cavanagh သည် 'Future Melbourne' ကွန်ဖရင့်၌ Life ည့်ဟောပြောသူအဖြစ် Family Life ကိုကိုယ်စားပြုသည် Sustaining Melbourne's Prosperity ။
သြစတြေးလျမိသားစုလေ့လာရေးဌာနမှ Dr. Jenny Higgins (National Child Protection Clearinghouse) နှင့် Robyn Parker (Australianစတြေးလျမိသားစုဆက်ဆံရေး Clearinghouse) တို့သည်မိသားစုဘဝအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်မိသားစုဘဝသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာမှဒေါက်တာဂျဲနီဟစ်ဂင်က ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းကိုမိသားစုဘ ၀ ၏ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသောရပ်ရွာလူထုအစီအစဉ်နှင့်မိသားစုဘ ၀ မှကမ်းလှမ်းသောအခြားအစီအစဉ်များအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။
2006 - မှတ်တိုင်များ
Jo Cavanagh သည်ပညာရေးဆိုင်ရာ CREATE ဖောင်ဒေးရှင်း၏အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Jo Cavanagh သည်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်တိုင်းတာရန်အတွက်သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့နည်းလမ်းများကိုတင်ပြဆွေးနွေးရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အတ္တလန်တာရှိ Social Enterprise Alliance Gathering တွင်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
Jo Cavanagh သည်အပြောင်းအလဲကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ကုသမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်များရှိအလုပ်များကိုပေါင်းစပ်ရန်အတွက်လူထုအခြေပြုမိသားစုပံ့ပိုးမှုပုံစံ (၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်မူလကရေးသားခဲ့သော) စာတမ်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
2005 - မှတ်တိုင်များ
မိသားစုဘဝကိုခမည်းတော်နှင့်အတူပါ ၀ င်ခြင်း၊ အမျိုးသားများနှင့်နားထောင်ခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ရပ်ရွာပညာရေး၊ အကြံပေးခြင်း၊
မိသားစုများနှင့်လူထု ၀ န်ဆောင်မှုများကွန်ဖရင့်တွင်၊ မိသားစုဘဝသည်လူထုမှပံ့ပိုးမှုများနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်ရပ်ရွာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခံစားရရန်ကူညီခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့်တီထွင်ဆန်းသစ်သော Creating Capable Communities အစီအစဉ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
မိသားစုဘ ၀ ၏ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းဆွေးနွေးချက်ကိုပိုမိုခိုင်မာသည့်မိသားစုများလေ့လာရေးဖလှယ်ရေးသတင်းလွှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ 7, နွေ ဦး ရာသီ 2005, pp.34-36 ။
မိသားစုဘဝကိုမွေးကင်းစကလေးငယ်များနှင့်မိသားစုများအတွက်စံပြအဖြစ် Community Bub ၏အစီအစဉ်သစ်အကြောင်း၊ ဘရစ္စဘိန်းရှိမွေးကင်းစကလေးငယ်စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားညီလာခံတွင်တင်ပြခဲ့သည်။ တင်ပြချက်ကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
2004 - မှတ်တိုင်များ
Jo Cavanagh သည်“ မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုသည်အလုပ်ခွင်ဆိုင်ရာပြ:နာ - မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုကိုတားဆီးရန်လုပ်ငန်းခွင်ပုံစံများ၊ ဗစ်တိုးရီးယားအသိုင်းအဝိုင်း၏အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထုတ်ဝေသောစာအုပ်ကိုပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်သည့် Family Life's Knock Out Violence အစီအစဉ်ကိုဒေါက်တာ Helen McGrath မှသုံးသပ်ခဲ့သည်။
2003 - မှတ်တိုင်များ
Anglicare သည် Jo Cavanagh အားအထက်လွှတ်တော်လူထုရေးရာကိုးကားစရာကော်မတီသို့ Institutional စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသို့တင်ပြရာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
2002 - မှတ်တိုင်များ
လူမှုရေးပေါ်လစီ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သောအစိုးရနှင့်လူသားချင်းစာနာမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကာလတို၊ ရေရှည်နှင့်မျိုးဆက်များပြောင်းလဲမှုများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ဂရုစိုက်သောအသိုင်းအဝိုင်း၏အဓိကအခန်းကဏ္discussကိုဆွေးနွေးရန်စာတမ်းကိုတင်ပြခဲ့သည်။
2001 - မှတ်တိုင်များ
Jo Cavanagh သည်အိမ်အပြင်ဘက်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အရည်အသွေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာမူဘောင်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးပိတ်ဆို့မှုများခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော Mercy Family Service ၏ဆွေးနွေးမှုစာတမ်းအတွက်အရေးပါသောပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မိသားစုအသက်မိသားစု၏အကြမ်းဖက်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သော Jo Cavanagh နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ Hewitt နှင့် Anderson တို့၏ပူးတွဲရေးသားမှုကိုသြစတြေးလျအိမ်တွင်းနှင့်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုရှင်းလင်းရေးအိမ်မှထုတ်ဝေခဲ့သည်။
“ မိသားစုများနှင့်အကြမ်းဖက်မှု - ဘက်စုံ၊ မိသားစုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှု” ဟူသောစီမံကိန်းအတွက်မိသားစုဘဝသည်သြစတြေးလျနိုင်ငံအစိုးရအကြီးအကဲများ၏ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၉ - ထုတ်ဝေသည့်အစီရင်ခံစာ - မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ခံရသည့်ကလေးငယ်များနှင့်လူငယ်များကိုထောက်ပံ့ခြင်း
Jo Cavanagh သည် Lesley Hewitt နှင့် Diana Anderson တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ 'မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ခံစားခဲ့ရသောကလေးများနှင့်လူငယ်များကိုထောက်ပံ့ခြင်း - တောင်ပိုင်းမိသားစုဘဝ STAR (အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လုံခြုံသောဟောပြောချက်)' ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အစီအစဉ်အစီရင်ခံစာကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။
၁၉၉၈ - ထုတ်ဝေခဲ့သောသုတေသနစာတမ်း - 'မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုအပေါ်မိသားစု၏တုံ့ပြန်မှုလုံးလုံး
မိသားစုဘဝကိုယ်စား Jo Cavanagh သည်Studiesစတြေးလျမိသားစုလေ့လာမှုအင်စတီကျုတွင်ညီလာခံတွင် 'မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုအပေါ်မိသားစုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလုံး - မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုအတွက်အစီအစဉ်အသစ် - မူဝါဒပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အစီအစဉ်သုတေသနနှင့်ပေါင်းစည်းသောအလေ့အကျင့်' ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောသူမ၏သုတေသနစာတမ်းကိုတင်ပြခဲ့သည်။ မိသားစုတွင်အကြမ်းဖက်မှု၊ ပconflictိပက္ခနှင့်အလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောပြaddressနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဘက်ပေါင်းစုံကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများလိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည့်မိသားစုဘဝ၏ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသောရပ်ရွာအခြေပြုချဉ်းကပ်မှုတွင်ဤစာတမ်းကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။စက္ကူကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ.
၁၉၉၈ - သုတေသနစာတမ်းထုတ်ဝေသည် -“ အကြမ်းဖက်မှုတွင်ကလေးသူငယ်များနှင့်မိသားစုများ၏အမြင်အားဖြင့်”
Jo Cavanagh နှင့် Lesley Hewitt ရေးသားသောစာတမ်းမှာ“ အကြမ်းဖက်မှုအတွင်းရှိကလေးသူငယ်များနှင့်မိသားစုများ၏အမြင်အားဖြင့်”
၁၉၈၆ - မိသားစုဘဝသည် MATES ဟုခေါ်သောအမျိုးသားများ၏အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်
Family Life သည်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုကဏ္inတွင်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ပြီးယောက်ျားအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ဦး ဆောင်နေသည်။ မိသားစုဘဝ၏အမျိုးသားများ၏အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်သည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအားအကြမ်းဖက်မှုကိုကျင့်သုံးသောအမျိုးသားများအတွက် MATES ('Moving to the Stanges Changes') အဖွဲ့နှင့်စတင်ခဲ့သည်။ No to Violence (NTV) မှအသိအမှတ်ပြုထားသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပူးတွဲပံ့ပိုးသူများသည်လေးစားမှုရှိသောအတူတကွကူညီပံ့ပိုးမှုပုံစံကိုပုံဖော်သည်။ တာ ၀ န်ခံမှုနှင့်တာ ၀ န်ခံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်အဖွဲ့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအပြုအမူများနှင့်သဘောထားများတွင်အပြုသဘောဆောင်သောစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
၁၉၈၂ - ငွေအတွက်မဟုတ်ဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းညှိနှိုင်းရေးမှူးများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်
တည်ထောင်သူဒါရိုက်တာမာဂရက် McGregor OAM၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုတည်ထောင်သူ Shirley James၊ Joan Gerrand နှင့် Doris Cater တို့သည်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းညှိနှိုင်းရေးမှူးများအတွက်“ For Love Not Money” စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့သည်။